Akụkọ - akpa n'ime nkwakọ ngwaahịa dị mfe
Akpa na nkwakọ ngwaahịa dị mfe
Akpa dị na nkwakọ ngwaahịa na-eji igbe, akpa, na ihe dabara adaba iji bufee na kesaa ngwaahịa mmiri mmiri nke ọma ma na-enweghị mmetọ.
A na-arụ akpa ahụ site na ọkwa nke ihe nkiri a na-ejikọta ọnụ ma chekwa ya iji chebe àgwà ngwaahịa ahụ ma chekwaa ya n'ime ya ka ọ ghara imeju site na njedebe.
Ntọala nke akpa anyị niile na igbe igbe, a na-emechi oghere plastik a na-emepụta n'ime akpa ahụ mgbe a na-eme ya ma bụrụ ebe ntinye maka imeju ngwaahịa ahụ n'ime akpa ahụ. Mgbe emejuchara, a na-ekpuchi oghere akpa ma ọ bụ okpu dị mfe, mgbata na-ekesa, ma ọ bụ njikọ na nrụnye dabere na ebumnuche njedebe ha.
Nke a bụ ụdị ihe ndị sara mbara gụnyere spouts, okpu, valves, na ndị ọzọ. Ọ na-agụnye ihe ọ bụla na-ejikọta na akpa akpa. Ngwakọta akpa n'ime igbe nwere ike ịbụ ihe ọ bụla site na okpu dị mfe nke na-ekpuchi spout, ruo ọkaibe nkesa valvụ ma ọ bụ njikọ na hoses nke na-agafe n'etiti spout/valv na n'èzí akụrụngwa.
ngwugwu nke dị n'èzí nke na-ejide akpa mkpuchi na nke jupụtara. Nke a nwere ike ịbụ ihe ọ bụla site na igbe kaadiboodu dị mfe ruo nchara nchara nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
William R. Scholle bụ onye ọsụ ụzọ na ikike ikike nke akpa dị na igbe na 1955, a na-ejikwa ya na mbụ bufee acid batrị n'enweghị nsogbu ọ bụla n'ọdụ ụgbọ mmiri na-ejuputa na ụlọ ahịa ndozi. Ebe ọ bụ naanị na-amalite na ụlọ ọrụ ụgbọ ala, usoro nkwakọ ngwaahịa a gbasaa ngwa ngwa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Mgbe emechara usoro ndochi aseptic na 1956, akpa dị n'ime igbe nwere ike ịgbasa na ngwaahịa nri na ihe ọṅụṅụ na-arụ ọrụ.
Oge nzipu: Ọktoba 11-2021